Maleeshiyo katirsan Al-Shabaab oo afduubtay afar shaqaale gargaarka ah oo u shaqaynayay haayada WHO - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMaleeshiyo katirsan Al-Shabaab oo afduubtay afar shaqaale gargaarka ah oo u shaqaynayay haayada WHO
April 4, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Maleeshiyo katirsan Al-Shabaab oo afduubtay afar shaqaale gargaarka ah oo u shaqaynayay haayada WHO. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirro) Afar shaqaalaha gargaarka ah oo u shaqaynayay haayada caafimaadka aduunka ee WHO ayaa waxaa afduubtay maleeshiyo katirsan Al-Shabaab.
Shaqaalaha oo Soomaali ah, ayaa lagu afduubtay gudaha degmada Luuq ee gobolka Gedo gelinkii dambe ee Isniintii.
Shaqaalaha ayaa waday howlo talaal ah oo ay maalgelisay haayada WHO marka la afduubtay.
Gobolka Gedo, oo ah halka afduubku ka dhacay ayaa kamid ah gobolada koonfureed oo ay ku xoogantahay Al-Shabaab.
Sida ay ilowareedyadu sheegayaan, odayaasha dhaqanka ayaa wada wadaxaajood ku saabsan sidii loo sii dayn lahaa afarta qof ee shaqaalaha gargaarka ah.
February 10, 2017 Farmaajo oo ka codsaday shacabka in ay joojiyaan dabaaldegyada